Ukuphuculwa okungu-10 onokuPhumeza ukuThengiswa kweNtlalo namhlanje! | Martech Zone
Inxalenye ekhulayo ye- Imizamo yokuthengisa engenayo esiyithumelayo kwiinkampani zibandakanya zombini iindlela ezihlawulelweyo kunye nezentlalo zonxibelelwano. Ndihlala ndibethwa ziindaba eziqhubekayo zokuba imithombo yeendaba zentlalo ayifumani mbuyekezo kutyalo-mali ezifunyanwa ziinkampani kwenye indawo. Kukho konke ukunyaniseka, ndicinga ukuba kungenxa yokusilela kokuphunyezwa kunye nesicwangciso esiliqili, hayi esiphakathi. Siyaqhubeka nokubona ukukhula kwintengiso yentlalontle kwaye kuye kwasebenza ngempumelelo emangalisayo ekuqhubeni iindleko zethu ngokukhokelela ezantsi ngokubanzi.
NgoNyaka oMtsha kuza Izigqibo zoNyaka oMtsha. Mhlawumbi eyakho iya ejimini, ifunda ulwimi olutsha okanye iphinde iziphumze. Nokuba zithini na izigqibo zakho ezizezakho, kukwakho nethuba elihle lokuba iiakhawunti zakho zemidiya yoluntu zingasebenzisa isiqalo esitsha kuNyaka oMtsha, nazo. Kungenxa yoko le nto sidibanisa olu luhlu lwezisombululo ezili-10 zemidiya yoluntu ukugcina uphawu lwakho lusemkhondo.
Nazi iingcebiso ezili-10 zokuSebenza zeNtengiso yezeNtlalontle
Sebenzisa izinto ezingakumbi
Fumana ixesha lakho elifanelekileyo
Uvavanyo usebenzisa iiNtengiso zeNtlalo
Yenza iZithuba zakho ziHambe ngeVidiyo
Sebenzisa iiHashtag ngokufanelekileyo
Nokwandisa iZithuba zamaQonga ahlukeneyo
Thumela Okuncinci Ngawe
Intengiso ye-Master Mobile
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye Tailwind.
tags: hashtagsUkusetyenziswa komfanekisozentengiso zentlaloUmxholo wemidiya yoluntunxaxheba kwezentlaloii-hashtag zemidiya yoluntuimifanekiso yemidiya yoluntuukwenziwa kwemidiya yoluntuamaqonga eendaba ezentlaloizigqibo zosasazo zasekuhlaleniamajelo eendaba ezentlaloividiyo yemidiya yoluntuintengiso yeselfowuniividiyo yentlalo